Mararamiro emuUmambo—Kutsvaka Kururama kwaMwari | Umambo hwaMwari
Kuruboshwe: Mhuri yeBheteri yeBrooklyn yakapedzisira kupemberera Krisimasi muna 1926; kurudyi: Vanhu vanocherechedza kuti Zvapupu zvaJehovha zvakasiyana nevamwe vanhu
Mararamiro emuUmambo—Kutsvaka Kururama kwaMwari
UNOSIMUDZIRA muvakidzani wako ruoko uchipfuura hako. Wava nemazuva uchiona kuti ari kukucherechedza nemhuri yako. Anokusimudzirawo ruoko okudaidza. Anoti: “Ndingambokubvunzawo? Chii chinomboita kuti vanhu imimi musiyane nevamwe kudaro?” “Uri kurevei?” unomubvunza kudaro. Anoti, “Muri Zvapupu zvaJehovha, handiti? Makasiyana nevamwe vanhu vose. Makasiyana nemamwe machechi, hamupembereri mazororo, uye hamupindiri mune zvematongerwo enyika kana hondo. Hamusvuti. Uye mhuri yenyu ine tsika dzakazonaka. Chii chinoita kuti musiyane nevamwe vanhu zvakadaro?”
Unoziva kuti mhinduro yacho ndeyekuti, tiri kutongwa neUmambo hwaMwari. Sezvo ari Mambo, Jesu anogara achitinatsa. Ari kutibatsira kuti titevere tsoka dzake, izvo zviri kuita kuti tive vanhu vakasiyana nevamwe munyika ino yakaipa. Muchikamu chino tichaona kunatswa kuri kuitwa vanhu vaMwari neUmambo hwaMesiya panyaya dzekunamata, dzetsika uye dzemarongerwo akaitwa zvinhu musangano, zvose zvichiitirwa kuti Jehovha akudzwe.
Bhaibheri rinosiyanisa nyonganyonga nerugare kwete nekurongeka. Nei? Mhinduro yacho inobatsira sei vaKristu nhasi?
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Mararamiro emuUmambo—Kutsvaka Kururama kwaMwari